Boqortooyadda Sacuudi Carabiya ayaa shaqa ka dhigatay Xayiraada Xoolaha Soomaalida – Xeernews24
Boqortooyadda Sacuudi Carabiya ayaa shaqa ka dhigatay Xayiraada Xoolaha Soomaalida
Dowladda Sacuudiga ayaa joojisay xoolihii looga soo dhoofin jiray Soomaaliya,sida laga soo xigtay qaar ka mid ah ganacsatada xoolaha geyn jiray dalka boqortooyadda Sacuudiga.
Waxaa lugu sheegay joojinta xoolaha loo iibgeyn jiray Sacuudiga sababo la xidhiidha dhinaca caafimaadka,warbixin ka soo baxday wasaaradda deegaanka,beeraha iyo biyaha ayaa lugu sheegay go’aankan.
Nuux Daahir Camuud oo ka mid ah ganacsatada ku sugan dalka Sacuudiga ee xoolaha looga keeni jiray Soomaaliya ayaa in amar ka soo baxay xukuumadda dalkaas lugu joojiyay xoolaha laga soo qaadi jiray Soomaaliya.
“Qoraalkan oo kasoo baxay Wasaaradda Beeraha Sucuudiga, waxayna ku sheegeen in la hakiyay xoolaha laga soo dhooiyo Soomaalia, dhammaan cid walba oo ay khuseysana way u qaybiyeen sida Maxjarrada,” ayuu yidhi Nuur oo la hadlayay idaacadda VOA-da.
Inta wuxuu ku darey,“Waxay Qoraalkan ku sheegeen in Arrimo dhinaca Caafimaad ah loo Hakiyay xoolaha Soomaalida, balse xilli cayiman ma aysan sheegin marka laga soo tago si xilliga kumeel-gaadh ah.”
Camuud,waxaa kalo uu sheegay inay dhib weyn ku noqonayso ganacsatada iyo dadka Soomaalida go’aanka ka soo baxay dowladda Sacuudiga ee lugu joojiyay xoolaha loo dhoofin jiray.
Sacuudiga waa suuqa ugu weyn ee loo iibgeyo xoolaha laga qaado Soomaaliya,mana-jirto wali jawaab ay dowladda Soomaaliya ka bixisay go’aankan cusub.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2016/12/dhoof-xoolo.jpg 433 650 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2016-12-09 21:01:052016-12-09 21:01:05Boqortooyadda Sacuudi Carabiya ayaa shaqa ka dhigatay Xayiraada Xoolaha Soomaalida
Daawasho Wacan Madaxweyne Geele wali na daba Wada Afkii Amxaarka kana Xishoodey... Xaas madaxweyne oo lagu haysto fargal 1.4 milyan oo doolar Oo Ka Turjumaya Ku...